आकर्षण थप्दै इन्टेरियर डिजाइन | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) आकर्षण थप्दै इन्टेरियर डिजाइन
on: February 08, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
काठमाडौं । सामानको यथोचित व्यवस्थापन हुने गरी डिजाइन गरिएको घरको आन्तरिक संरचनाले जीवनयापन सहज बनाइदिन्छ । त्यसैले त अहिले आधुनिक जीवनशैलीको संकेतका रूपमा इन्टेरियर डिजाइनलाई अनिवार्य ठान्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । नेपालमा घर बनाउनुलाई नै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय आन्तरिक सजावट पनि प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ ।
घरको सजावटका लागि विशेषगरी फ्लोरिङ, फर्निसिङ, पेण्टिङ, इण्डोर प्लाण्टलगायतका सामग्री प्रयोग हुन्छन् । फ्लोरिङमा कार्पेट, पीभीसी टायल, लेमिनेटेड फ्लोरिङ, मार्बलजस्ता सामानको समुचित प्रयोग गरिन्छ । फर्निसिङमा पर्दा, सोफाकभर, बेडकभर, वालपेपर, डोरम्याटलगायत सामग्री पर्छन् । त्यस्तै सजावटका लागि घरभित्र विभिन्न फूल तथा बिरुवा (इन्डोर प्लान्ट) राख्ने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न कलात्मक सामग्री राखेर पनि घरलाई झन् उत्कृष्ट स्वरूप दिन सकिन्छ । घरमा विभिन्न प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएका कोठाका आधारमा त्यसको सजावट गरिन्छ । किचेन, लिभिङ रूम, बाथरूम, बेडरूम, किड्स रूम, डाइनिङ रूम, होम अफिस तथा गार्डेनको सजावटले घरको सौन्दर्य बढाउँछ ।
जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, आकर्षक हाउजिङहरूको निर्माण र बढ्दो आर्थिक क्रियाकलाप इन्टेरियर डिजाइनको पेशागत विस्तारमा सहयोगी बनेको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ बनेकामध्ये लगभग ७५ प्रतिशत घरमा इन्टेरियर डिजाइनपछि मात्र फर्निचर खरीद हुने गरेको यस क्षेत्रमा सम्बद्धहरू बताउँछन् ।
कसरी गर्ने घर सजावट ?
हरेक मान्छेको आफ्नो घर छरितो र सुन्दर बनाउने इच्छा हुन्छ । त्यसैले, घर सजावटका लागि मानिसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् । कतिपय मानिसले पर्याप्त खर्च गरेर पनि घर चिटिक्क पार्न सकिरहेका हुँदैनन् । तर, कतिपयले भने थोरै खर्चमा पनि घरलाई आकर्षक लूक्स दिएका हुन्छन् । घरको आन्तरिक स्वरूप सुन्दर देखाउने प्रमुख कारण घरभित्रको सामानलाई उचित स्थानमा मिलाएर राख्न सक्नु हो । इन्टेरियर डिजाइन गर्दा कोठामा भित्ताको रङ, भुइँको रङ र छानो वा माथितिरको भागको रङबीच संयोजन हुन जरुरी छ । सामान्यतया अँध्यारो कोठामा उज्यालो रङको प्रयोग राम्रो हुन्छ । आराम गर्ने कोठामा भने अलि अँध्यारो खालको रङ प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
घर विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । उदाहरणका लागि व्यापारिक, आवासीय, धार्मिक, सार्वजनिक, अस्पताल, विद्यालय भवनलगायत विभिन्न प्रयोजनका घर हुन्छन् । यस्ता घरमा हुने क्रियाकलापका आधारमा त्यसको डिजाइनिङ इन्टेरियर डिजाइनरले गर्ने शिल्पकार बताँउछन् । घरका विभिन्न कोठाहरूमा हुने फरक–फरक क्रियाकलापका आधारमा त्यसको सजावट पनि फरक–फरक ढङ्गले नै गरिन्छ ।
कोठाको सजावट गर्नुअघि कुन प्रयोजनका लागि बनाउन लागिएको होे, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, त्यहाँ कस्ता किसिमका मानिसको आवतजावत हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोठाको सजावट गर्दा त्यसलाई सधैं भेटघाटमा आउने मान्छेको नजरले हेर्नुपर्ने शिल्पकारको भनाइ छ । भेटघाटमा आउने मानिसले राम्रो मानेनन् भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । कोठाको सजावट घरको मालिक, फर्निचर, प्लम्बर वा जो कोहीले पनि गर्न सक्छन् । तर, सर्वाङ्ग मिलाउने काम भने इन्टेरियर डिजाइनरले मात्र गर्न सक्ने शिल्पकारको भनाइ छ । महँगा सामग्री राख्दा मात्र कोठा राम्रो हुँदैन । त्यसलाई स्थान मिलाएर राख्न जान्नुपर्छ ।
कोठालाई सानो तथा ठूलो देखिने कसरी बनाउने ?
कोठामा राखिने सामग्रीहरूको आकार, रङ र स्थान मिलाएर सानो कोठालाई ठूलोजस्तो र ठूलो कोठालाई सानोजस्तो बनाउन पनि सकिन्छ । सानो कोठालाई ठूलोजस्तो बनाउनु परे त्यहाँ प्रयोग गरिने फर्निचरहरूको आकार सानो हुनुपर्छ । यसका लागि अँध्यारो खालको रङको सट्टा अलि उज्यालो रङ प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हाईबेडको सट्टा लो–बेड राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सानो मधुरो उज्यालो दिने बत्तीभन्दा अलि ठूलो बत्ती राख्नुपर्छ । त्यसैगरी ठूलो कोठालाई आरामदायी र त्यसमा कम खाली ठाउँ देखाउनुपरेमा त्यसको ठीक विपरीत गर्नुपर्छ ।
रङको आफ्नै महत्त्व
इन्टेरियर डिजाइनमा रङको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । रङ प्रयोगको आफ्नै सिद्धान्तसमेत हुन्छ । इन्टेरियर डिजाइनमा रङलाई प्राथमिक र दोस्रो रङका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । रातो, पहेँलो र नीलोलाई प्राथमिक रङ भनिन्छ भने अन्य सबै रङ यी तीन रङ मिलेर बनेका हुन्छन् । सेतो र कालो रङलाई भने न्युट्रल रङ मानिन्छ । त्यसैले, कोठामा रङको प्रयोग गर्दा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । घाम नपर्ने वा चिसो ठाउँमा अलि न्यानो खालको रङ लगाउनुपर्छ । साथै, घाम परिरहने स्थानका लागि भने अलि चिसो खालको रङ लगाउनुपर्छ । सामान्यतया सुन्तला रङलाई न्यानो रङ मानिन्छ भने हरियो र नीलोलाई चिसो रङ भनिन्छ । सधैं घाम पर्ने कोठामा उज्यालो रङ प्रयोग गर्दा अत्यधिक गर्मी महसूस हुन्छ ।
कोठामा प्रयोग हुने पर्दा, कार्पेट, बेड, फर्निचरलगायतको रङबीच पनि उत्तिकै तालमेल हुन जरुरी छ । कोठाका लागि पसलमा गएर कुनै सामग्री किन्नुअघि त्यसको रङ कोठामा भएका अन्य सामग्रीहरूसँग मिल्छ÷मिल्दैन भन्ने कुराको निश्चित गर्नुपर्छ । सबै सामग्री एकै रङको राख्दा दिक्कलाग्दो हुन्छ । धेरै खालको रङ भयो भने पनि झर्को लाग्दो र भद्दा हुन सक्छ । त्यसैले, ठाउँ, परिस्थिति, त्यहाँ बस्ने मान्छेको सङ्ख्या, त्यसको आकार आदिको अध्ययन गरेर रङको संयोजन गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि कुनै एउटा रङलाई आधार मान्न सकिन्छ । जस्तै– भित्ताको रङ गाढा नीलो, सोफाको रङ हल्का नीलो र अन्य एकदुई ठाउँमा सुन्तला रङका सामग्री राख्न सकिन्छ ।
घर तथा अफिसको सजावट
सकसमा सिमेन्ट उद्योग